कुन कुन विरामीलाई से’क्सले निकै फाइदा गर्छ ? जान्नुस – Online Khabar 24
कुन कुन विरामीलाई से’क्सले निकै फाइदा गर्छ ? जान्नुस
मानिसहरु यौ’ न स’ म्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् ।
तर नियमित यौ’न स’ म्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति वा फाइदा हुने देखाएको छ । नियमित से’ क्स ग ‘र्दा के के फाइदा हुन्छः
-टाउको दु’ख्नेः नेशनल सर्वे अफ से’क्सु’अल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोधले माइग्रेन भन्ने टाउको दुख्ने रोगका विरामीलाई नियमित से’ क्स फाइदाजनक हुने देखाएको छ । सोधले महिनामा ५ पटक भन्दा कम से’क्स ग’र्नेहरुलाई मा’इग्रेन हु’ने नयाँ तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ ।
-ब्लड प्रेशरः उच्च र’क्तचापका विरामीलाई पनि नियमित से’क्स फाइदाजनक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित से’ क्स गर्दा उच्च रक्त’ चाप नियन्त्रण हुने शोधको दावी छ ।
प्रोस्टेट क्या’ न्सरः नियमित से’ क्स ग’ र्ने पुरुषलाई प्रोस्टेट क्यान्स’ रको ख’ तरा निक्कै कम हुने दावी शोधकर्ताहरुले गरेका छन् । महिनामा २१ पटक वा नियमित से’ क्स ग’ र्दा प्रोस्टेट क्या’ न्सरको खासै ख’ तरा न हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
-मोटोपनबाट: मोटोपनबाट समस्यामा परेकाहरुलाई पनि नियमित से*क्स राम्रो मानिएको छ । कुनै पनि कसरत गर्नु भन्दा नियमित से*क्स मोटोपन घटाउन सहजसिद्ध हुने शोधकर्ताहरुको भनाइ छ ।
-हृद’यघातबाट कम खतराः नियमित से’ क्स गर्दा हृद’यघातको खत’ रा पनि कम हुने अध्ययनले देखाएको छ । नियमित से*क्स गर्दा शरीरमा एस्ट्रोजन र टेस्टो’स्टेरोनका संतुलन बनि राख्ने हुँदा हृद’ यघातको कम हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्। ताजा खबरबाट साभार गरियको खबर ।
Prevअन्तिम पटक यस्तो म्यासेज छोडेर एनएमबी लघुवित्तकी कर्मचारी २५ वर्षीया मनकुमारी सम्पर्क बि’हि’न !
nextतिमिलार्इ समाजको लाजले घर आउन दिएन, मलाइ तिमी बिना समाजमा उपस्थिती देखाउन आएन’ भन्दै बि’ष पिएका हेमप्रकाश वलीको निधन